अस्ट्रेलियामा नेपालीको नालीबेली : ९ जनामा संक्रमण, ४ जना निको भए — Breaking News, Headlines & Multimedia
अस्ट्रेलियामा नेपालीको नालीबेली : ९ जनामा संक्रमण, ४ जना निको भए
मनऋषि धिताल चैत्र २२, २०७६अष्ट्रेलिया
सिड्नी । अस्ट्रेलियामा आइतबार साँझसम्मको रिपोर्टअनुसार कोरोना संक्रमणबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई लाख ११ हजारको परीक्षण गर्दा जम्मा तीन हजार नौ सय ८४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको न्यु साउथ वेल्स राज्य बनेको छ जहाँ एक हजार सात सय ९१ जनामा संक्रमण भेटिएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले चालेको कदम
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले सोमबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरु जम्मा हुन नपाउने नियम घोषणा गरेका छन् । कोरोना भाइरसबाट अस्ट्रेलियालाई सुरक्षित राख्न यो कदम चालिएको उनले आफ्नो सम्बोधनमा बताएका छन् ।
सरकारी घोषणा पालना नगर्नेहरुलाई हजारौं डलर जरिवाना र जेल सजायसम्म हुने कुरा प्रधानमन्त्री मरिसनले बताएका छन् । सत्तरी वर्षमाथिका, हाल बिरामी अवस्थामा रहेका साठी वर्षमाथिका र आदिवासी समुदायका पचास वर्षभन्दा माथिका सबैलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन पनि उनले सल्लाह दिएका छन् ।
तर, घरबाट गर्न नमिल्ने अत्यावश्यक काम, अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल र सफा हावा लिन आफ्ना एक सहयोगीसँग सार्वजनिक स्थलमा जान पाइने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेक हन्टले अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो सप्ताहको अन्तमा अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपनि तुलनात्मक रुपमा बृद्धिदर घटिरहेको सरकारी दाबी छ । ।
अस्ट्रेलियाका जनताले सरकारले भनेको सामाजिक दुरीको अनुशासनलाई पालना गरेकाले संक्रमणको बृद्धिदर अघिल्लो हप्ताभन्दा घटेको दाबी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।अस्ट्रेलियाले अघिल्लो हप्ताहरुमा सामाजिक जमघटमा बढीमा १० जनाको सीमा तोकेको थियो । साथै अत्यावश्यकबाहेकका कामका लागि घर बाहिर ननिस्कन पनि सरकारले जनतालाई अपिल गरेको थियो ।
अत्यावश्यकबाहेकका सबै व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा झन्डै १५ लाख मानिस बेरोजगार भएको बताइन्छ । तर, सरकारले बेरोजगार अस्ट्रेलियन जनता र व्यवसायलाई केन्द्रित गरेर आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याएको छ । सोमबारदेखि लागु हुने दुईभन्दा बढीको सार्वजनिक जमघटमा सिमाना र विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियमले अस्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणलाई घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि स्वेच्छिक एकान्तबासमा रहन दिइएको अवसरलाई उल्लंघन गरेकाले अस्ट्रेलियाले शनिबार रातिदेखि अस्ट्रेलिया आइपुग्ने सबैलाई अनिवार्य सरकारी निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । यहाँ कोरोनाको संक्रमण ८० प्रतिशत विदेशबाट आएकाहरुबाट भइरहेको तथ्यांक छ ।
नेपालीको अवस्था के छ ?
अस्ट्रेलियाको कूल जनसंख्याको दर हेर्ने हो भने हरेक एक हजारमा चार जना नेपाली हुन् । किनकि यहाँको अहिलेको जनसंख्या दुई करोड ५६ लाख हाराहारीमा छ, जसमा एक लाख नेपाली छन् । करिब चार हजार अस्ट्रेलियनमा कोरोना संक्रमण देखिँदा जम्मा नौ जना नेपालीमा पनि देखिएको छ । तर, सबैको अवस्था सामान्य छ ।
चार जना त सञ्चो भइसकेका छन् । अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायका मानिसहरु प्रायः अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत छन् । हजारौंको संख्यामा नर्सिंग, बृद्धबृद्धा स्याहार केन्द्रहरु तथा सरसफाई सेवामा छन् । हजारौं अहिले पनि सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन् । उनीहरु अहिले कोरोना जस्तो महामारीको संक्रमणको जोखिममा हुनसक्छन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारले कुनैपनि खालको बिसञ्चो महसुस भएमा घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । कोरोना संक्रमणको आशंका भएमा तुरुन्त सम्पर्क गर्न पनि भनेको छ । जसको परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क हुने भएकाले आर्थिक बोझको चिन्ता वा बीमा झन्झटको चिन्ता कसैले पनि मान्नुपर्ने छैन ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलिया तथा नेपाली दूतावास क्यानबेराको एक संयुक्त तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियामा अहिले चार सय ८७ जना नेपालीहरु एकान्तवास(आइसोलेसन) मा छन् । जसमा तीन सय १९ जना पुरुष र एक सय ६८ जना महिला छन् । उनीहरुमध्ये चार सय ३० जना हालसालै नेपालबाट आएका र ५७ जना अस्ट्रेलियामा नै कोरोना संक्रमितसँग निकट सम्पर्कमा पुगेको आशंका गरिएकाहरु छन् ।
एकान्तवासमा भएकामध्ये चार सय ८१ जना २० वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका छन् । ६० वर्ष तलका जम्मा ६ जना छन् । यो तथ्यांकमा एक सय दुई जनालाई गैरआवासीय नेपाली संघका विभिन्न राज्य समितिहरुले खाद्यान्नदेखि अत्यावश्यक वस्तुहरु किनिदिएर सहयोग गरेकाछन् ।
नेपालीमा कोरोना संक्रमणको कथा
गत ८ मार्च २०२० आइतबारका अस्ट्रेलियन सञ्चारमाध्यममा समाचार आयो – ‘नेपालीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो ।’ यो नेपाली समाजभित्रको पहिलो घटना थियो ।
नेपालबाट सिंगापुर, सिड्नीहुँदै २०२० फेब्रुअरी २६ मा तास्मानियाको होबर्ट आइपुगेका २० वर्षीय ती नेपाली विद्यार्थीमा फेब्रुअरी २७ मा नै रुघाखोकीका संकेतहरु देखिएका थिए । तर, उनी मार्च ६ शुक्रबारसम्म पनि स्वास्थ्य हटलाइनको सम्पर्कमा आएनन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनको रोयल होबर्ट अस्पतालमा प्रारम्भिक परीक्षण गरियो र परीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट आउञ्जेल एकान्तवासमा रहन भनियो । तर, उनले त्यो गरेनन् । जब मार्च ७ शनिबार उनको रिपोर्ट आयो, जसमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखियो । अनिमात्रै उनलाई एकान्तवासमा राखियो ।
तास्मानियाका सार्वजनिक स्वास्थ्यका निर्देशक डा. मार्क भेइचले भने, ‘सेल्फ आइसोलेसन अर्थात् स्वेच्छिक एकान्तवासको निर्देशन नमान्ने कुरा कसैका लागि पनि सह्य हुनेछैन ।’
त्यसपछि, सुरुभयो उनले केही सिफ्ट काम गरेको ग्राण्ड चान्सलर होटेल र दुईपटक गएको अस्ट्रेलियन आइडल कलेज र उनीसँगै बस्नेहरुमा संक्रमणको चिन्ता । उनीसँगै निकट सम्पर्कमा भएका आशंका गरिएका चारजना उनी बस्ने घरका, तीन जना घरबाहिरका उनका साथीहरु र एक अर्कोगरी आठ जना उनको ‘निकट सम्पर्कमा’ भएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरियो र ती संक्रमितलगायत सबै नौ जनालाई स्वेच्छिक एकान्तवासमा बस्न लगाइयो ।
‘निकट सम्पर्कमा’ आएका व्यक्ति ती हुन्, जो कुनै पनि कोरोना भाइरस संक्रमितसँग १५ मिनेट आमनेसामने बसेर समय बिताएका वा त्यस्ता व्यक्तिसँग दुईघण्टाभन्दा बढी एउटा कोठामा बिताएका हुन्छन् ।
यो परिभाषाभित्र पर्ने सबै १४ दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहनुपर्ने हुन्छ । तर, हाल उनी सञ्चो भइसकेका छन् र उनीसँग निकट सम्पर्कमा आएकाहरुले पनि स्वेच्छिक एकान्तवासका १४ दिन बिताइसक्दा कसैमा पनि संक्रमण भएको पुष्टि भएन । तर, तास्मानियाको नेपाली समाजलाई भने केही दिन यो कुराले सताइरह्यो ।
नेपाली समाजमा दोस्रो कोरोना संक्रमणको खबर मार्चको तेस्रो साता पत्ता लाग्यो । गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता नन्दु गुरुङकाअनुसार न्यु साउथ वेल्स राज्यको एउटा नर्सिङ होममा कार्यरत एक नर्समा कोरोना संक्रमण देखियो । स्वास्थ्यकर्मीहरुको सल्लाहमा उनी एकान्तवासमा रहिन् । हाल उनी निको भइसकेकी छिन् ।
नेपाली समाजमा कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो खबर भिक्टोरियामा सुनियो । भिक्टोरियास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास सूत्रकाअनुसार गत बिहीबार मार्च २६ मा एकजना नेपाली महिलाले आफूलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेपछि तत्काल जाँच गराइन् । शुक्रबार उनमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो ।
उनीसँगै बसेका एक पुरुष र एक महिला गरी अरु दुईजनाले शुक्रबार नै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराए । दुर्भाग्यवश आइतबार बिहान उनीहरुमा पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो । नेपाली महावाणिज्य दूतावास सूत्रले उनीहरुले हाल आफ्नै घरमा बसेर स्वस्थ्यलाभ गरिरहेको बतायो ।
गत बिहीबार २६ तारिखमा नै न्यु साउथ वेल्सको एक बस्तीमा अर्की एक महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका भयो । यो नेपाली समाजमा कोरोना संक्रमणको चौथो खबर थियो । उनले तत्काल जाँच गराइन् र उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । उनीसँगै बसेका अरु तीनजना महिलाले पनि शुक्रबार आफ्नो जाँच गराए ।
शनिबार उनीहरुमध्ये दुईजनामा कोरोना संक्रमण देखियो, एक जनामा देखिएन । कोरोना संक्रमण नदेखिएकालाई अलग राखेर अरु तीनजना संक्रमितलाई उनीहरुकै निवासमा आइसोलेसनमा राखियो । उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको गैरआवाशीय नेपाली संघ अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष देव गुरुङ बताउँछन् ।
यसरी अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा जम्मा आठ जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । जसमा दुईजना सञ्चो भएका र ६ जनाको स्वास्थ्य पनि सुधारोन्मुख रहेको गैरआवासीय नेपाली संघले बताएको छ ।
सामाजिक अभियन्ताहरुमार्फत् संक्रमितहरुले आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयतालाई सम्मान गर्न र उनीहरुको पहिचान खुल्नेगरी सूचनाहरु सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
विद्यार्थी बढी समस्यामा
अस्ट्रेलियामा नेपाली सामुदायिक संस्थाहरुको महासंघ फेन्काले यहाँको समाजसेवा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार अस्ट्रेलियामा अक्टोबर २०१९ सम्ममा जम्मा ५२ हजार नेपाली विद्यार्थी अध्यनरत छन् ।
सन् २०२० को जनवरीसम्मको आठ महिनामा २४ हजार पाँच सय नेपाली पर्यटकहरु अस्ट्रेलिया आएका छन्, जसमा अधिकांश विद्यार्थीका अविभावकहरु छन् ।
अस्ट्रेलियामा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी समस्या व्यहोरिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष नवीन पन्थका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भिसा लागेका तर नेपालबाट आउन नपाएका विद्यार्थी, विभिन्न कारणले नेपाल गएर फर्किन नपाएकाहरु र नेपालबाट नआउँदै भिसा सकिन लागेका विद्यार्थीहरु, यही भएर भिसा सकिन लागेका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु र यहीँ आएर बेरोजगार हुन पुगेका विद्यार्थीहरु तथा अन्य अस्थायी बासिन्दाहरुको समस्या अहिले बढेको छ ।
रोजगारीका अवसरहरु गुमेका तर अस्ट्रेलियन सरकारले दायित्व लिनुनपर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई यहाँको जीवन पनि असहज हुने र तत्काल नेपाल फर्किन पनि मुस्किल हुने भएकाले समस्या जटिल हुँदै जाने देखिन्छ ।
अहिले गैरआवासीय नेपाली संघले एकान्तवासमा भएका एक सयजनालाई पहिलो एक महिना न्यूनतम खानपिनको व्यवस्थापन गरे पनि निकट भविश्यमा हजारौं विद्यार्थीलाई एकैपटक पर्न सक्ने समस्या यहाँका सामाजिक संस्थाले समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन ।
केही केहीले अभिभावकको भिसा सकिने लगायत उनीहरु अधिकांशको बीमा नभएकाले समस्या हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, युवा सामाजिक अभियन्ता नवीन पन्त भन्छन् – हामी यहाँका विश्वविद्यालय, कलेज तथा राज्य सरकारहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधानको कोसिस गर्छौं ।
उनले थपे – स्वास्थ्यसम्बन्धी पर्याप्त सूचनाहरु भएपनि अहिलेका मुख्य समस्या दैनिक खानपिन, घरभाडा, रोजगारी, बीमा समस्या र अध्यागमन नीतिहरुबारे जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल फर्कन समस्या
अस्ट्रेलियाले नेपालमा रहेका आफ्ना स्थायी बासिन्दा तथा नागरिकहरुलाई अप्रिल १ मा यहाँ ल्याउने व्यवस्था गरेपनि अस्ट्रेलियाबाट नेपाल जान चाहने हजारौं नेपालीको तत्काल नेपाल जाने इच्छा पूरा हुने सम्भावना भने छैन ।
अस्ट्रेलिया आउने नेपाली जहाजमा अत्यावश्यक समस्या भएका नेपालीलाई नेपाल पठाउने पहल क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले गरेपनि यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया लामो हुनसक्ने कूटनीतिक जवाफ आइतबार नेपाली दूतावासलाई दिइसकेको छ । नेपाली दूतावासमा नेपाल जाने व्यवस्था गरिदिन दैनिक सयौं टेलिफोन तथा इमेलहरु आउने गरेको दूतावासका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अस्ट्रेलियाले नेपालबाट आउने आफ्ना सबै नागरिक तथा स्थायी बासिन्दाहरुलाई विमानस्थलबाट सोझै सरकारी क्वारेन्टाइनमा दुई हप्तासम्म राख्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।
तर, नेपालले हाल कसैलाई पनि नेपाल आउन नदिने निर्णय गरेको छ । अस्ट्रेलियामात्रै होइन, विश्वका दर्जनौं देशमा नेपाल आउन चाहने हजारौं नेपालीहरु छन् । तर, नेपालले अन्य देशहरुले जस्तै पूर्वतयारी नगर्दासम्म अहिले नेपाल जाने धेरैको चाहना पूरा हुने देखिँदैन ।
संकटमा कर्णाली प्रतिष्ठान आशाको केन्द्र वन्यो : मन्त्री रावल
लकडाउनले जापानमा नेपाली विद्यार्थी सकसमा
कर्णाली प्रदेशका गृहमन्त्री भण्डारी कर्णालीवासी भेट्न दशगजामा
एउटा भैँसी गर्भवती हुँदा राज्यभर उत्सव !